မှားယွင်းမှုများနှင့်ကျိုးကဏ္ဍအတွက် HARD DISK ကို CHECK - HARD DISK ကို - 2019
ပျက်စီးနေကဏ္ဍအပေါ် hard drive ကိုစစျဆေးဖို့ကိုဘယ်လို
hard drive - ဆိုကွန်ပျူတာ၏အလွန်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ သို့သော်သူကအထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောအမှားမှဖြစ်ပေါ်နိုင်။ ဒါကြောင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကျိုးကဏ္ဍအလုပ်၏ပြီးပြည့်စုံသောစွန့်ခွာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပြီးတစ်ဦးကို PC သုံးစွဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ယင်း၏အကျိုးဆက်များနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ထက်ပြဿနာတစ်ခုပေါ်ပေါက်ရေးကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အမြဲတမ်းပိုမိုလွယ်ကူ။ ထို့ကြောင့်, မမှန်ကန်ကြောင်း HDD စစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှပြဿနာများကိုရှောင်ရှားရန်လိုလားတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူကြောင့်ကျိုးပဲ့ကဏ္ဍများ၏ရှေ့မှောက်တွင်စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
လုပ်ငန်းကဏ္ဍ - ကထုတ်လုပ်မှုအဆင့်မှာအပိုင်းပိုင်းခွဲထားတဲ့အပေါ် hard disk ကိုဒေတာသိုလှောင်မှုတစ်ယူနစ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူတို့ထဲကအချို့အရေးအသားနှင့်စာဖတ်ခြင်းဒေတာအတွက်မကောင်းတဲ့, လက်လှမ်းမမှီဖြစ်နိုင်သည်။ (အင်္ဂလိပ်ကနေ။ မကောင်းပါလုပ်ကွက်) ကျိုးပဲ့သောကဏ္ဍသို့မဟုတ်ဒါခေါ်မကောင်းတဲ့-လုပ်ကွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ယုတ္တိရှိပါတယ်။
စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု - လေထုနှင့်မြေမှုန့်ကိုစားသုံးမိ drop;
တစ်ဦးကခိုင်မာတဲ့ jolt သို့မဟုတ်စျေးမှာရိုက်ကူးနေစဉ် / စာဖတ်ခြင်းဒေတာ;
ထိုသို့သောကဏ္ဍများ, alas, သင်သာသာသူတို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုမှကာကွယ်ရန်နိုငျသညျ, ပွနျလညျထူထောငျရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
logical မကောင်းတဲ့ကဏ္ဍများ HDD မှမှတ်တမ်းတင်နေစဉ်အတွင်းဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်ရုတ်တရက်ပါဝါပိတ်ထားခြင်းဖြင့်စေသောပရိုဂရမ်းမင်းအမှားအယွင်းများ, ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ HDD ပြဿနာဒေသများရှိရေးသားခြင်းမပြုမီ check လုပ်ထားသောအခါတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်, ဖျော်ဖြေမပေးပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိုကဲ့သို့သောကဏ္ဍများသူတို့ကိုသင် restore လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုလိုတာက, အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုကိုဖြစ်ကြသည်။
အသုံးပြုသူသင့် hard disk ကိုစစ်ဆေးမထားဘူးဆိုရင်တောင်ကျိုးကဏ္ဍနေဆဲခံစားခဲ့ရလိမ့်မည်:
အထူးသဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် hard drive ကိုအနေဖြင့်ဒေတာများဖတ်ရှုခြင်း၏အချိန်လေးအတွင်းရပ်ဆိုင်းမှုစနစ်များ;
ရုတ်တရက်ပြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့် PC ကို၏မတည်မငြိမ်စစ်ဆင်ရေး;
operating system အမျိုးမျိုးသောအမှားပြသ;
ထူးဆန်းတဲ့ဆူညံသံ (ညှစ်သံမြည်, ကလစ် နှိပ်. , နှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်လိုမျိုး) မောင်း;
မကောင်းတဲ့လုပ်ကွက်ထိုကဲ့သို့သောဒြပ်စင်များ၏ကိရိယာ disk ဒါမှမဟုတ်ချွတ်ယွင်းအတွင်းပိုင်းမွမှေုနျ့နှငျ့အပျက်အစီးအဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်းဆိုပါကအလွန်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, မကောင်းတဲ့ကဏ္ဍများယင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်မသာပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီအချိန် disc ကိုအပေါ်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ data တွေကိုရယူသုံးစနစ်ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်ပျက်မှုကာကွယ်တားဆီးဖို့အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။ ဖိုင်တွေကိုစုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်အသုံးပြုသူအဖြစ်မကြာမီ data တွေကိုအသစ်တစ်ခုကို HDD ရေးသားနိုင်ပါတယ်အဖြစ်နိမ့်ဆုံးဖို့ hard disk ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုလျော့ချခြင်းနှင့်စနစ်ဟောင်းယူနစ်ကိုအစားထိုးရပေမည်။
အဆိုပါယုတ္တိမကောင်းတဲ့ကဏ္ဍများနှင့်အတူစာချုပ်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်။ ပထမဦးစွာစမ်းသပ်သင့် hard drive မှာပြဿနာတစ်ခုမှာအားလုံးရှိ, မရှိအထဲကရှာတွေ့မှကူညီပေးပါမည်သည့်အထူးအစီအစဉ်၏အကူအညီဖြင့်ဖျော်ဖြေရပါမည်။ ကတွေ့ရှိခဲ့သည်ဆိုပါကအမှားဆုံးမပဲ့ပြင်ကို run နှင့်၎င်းတို့၏ဖျက်သိမ်းရေးဘို့စောင့်ဆိုင်းနေသည်။
Method ကို 1: ဖော်ထုတ်ဘို့ utility ကိုအသုံးပြုခြင်း
သင့်ရဲ့ HDD တွေနဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ရှိလျှင်အထူးပြု software ကို အသုံးပြု. ကြည့်ရှုပါ။ ရိုးရှင်းတတ်နိုင်နှင့်အခမဲ့ပရိုဂရမ် Crystal Disk ကိုအင်ဖိုဖြစ်ပါတယ်။ အစီရင်ခံစာသငျသညျ3မှတ်အာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်ရှိရာ hard drive ကို၎င်း၏အပြည့်အဝရောဂါရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုခုနှစ်တွင်:
အဆိုပါ disk ကိုအဆင့်အတန်း "အဖြစ်မှတ်သားခဲ့လျှင်ကောင်းစွာအထက်ပါအညွှန်းများကိုဘေးမှာ lit အပြာရောင်အလင်းမီးသီးများမှာ ", ထိုငျသညျမစိုးရိမ်သင့်ပါတယ်။
သို့သော် disc ကို၏အခြေအနေ - "အချက်ပေး!"ဒါမှမဟုတ်"ဆိုးသော"အဝါရောင်သို့မဟုတ်အနီရောင်မီးလုံးနှင့်အတူ Backup လုပ်ဖို့ဂရုစိုက်ရန်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးလိုအပ်သောကြောင်းဖော်ပြသည်။
သင်တို့သည်လည်းစစ်ဆေးအခြား tools တွေကိုသုံးနိုင်သည်။ မကောင်းတဲ့-ကဏ္ဍများစစ်ဆေးနေတဲ့ function ကိုတစ်ခုချင်းစီသည်အရာ၏လိုက်ဖက်3အစီအစဉ်များကိုအောက်ပါလင့်ခ်မှာဆောင်းပါး၌တည်၏။ ယင်း၏ဘေးကင်းလုံခြုံအသုံးပြုရန်၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်အသိပညာပေါ်တွင်အခြေခံတိကျတဲ့ utility ကိုကုန်ကျစရိတ်, ကိုရွေးပါ။
ပိုများသော: အဆိုပါ hard disk ကိုစစျဆေးဖို့အစီအစဉ်ကို
Method ကို 2: built-in utility ကို chkdsk ကိုသုံးပါ
Windows တွင်, ထိုအစီအစဉ်ကိုပြီးသား Third-party software ကိုထက်က၎င်း၏အလုပ်ပိုကောင်းမထားတဲ့မကောင်းတဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုပေါ်တွင်တစ်ဦးစမ်းသပ်မောင်းနှင်ဘို့တည်ဆောက်ထားသည်။
အဆိုပါကိုသွားပါ "ဒီကွန်ပျူတာ" ("ကြှနျတေျာ့ကှနျပွူ"Windows7ကို"ကွန်ပျူတာ"Windows 8 ကို) ။
"မှန်ကန်သော drive ကို Select လုပ်ပါ, mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးကလစ်နှိပ်ပါဂုဏ်သတ္တိများ".
Windows 8 နှင့် 10 ခုနှစ်တွင်အများဆုံးဖွယ်ရှိ, သင် drive ကိုစိစစ်အတည်ပြုမလိုအပ်ပါဘူးအကြောင်းကြားထားပါသည်။ သင်အတင်းအကျပ်စကင်ကို run ချင်လျှင်, "ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါdisk ကိုစစ်ဆေး".
Windows 7, "သင်ခလုတ်ကိုအပေါ်စစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသားကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါချင်ရာနှစ်ခု parameters တွေကိုအတူပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်ပစ်လွှတ်".
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အဆိုပါ hard drive ကိုအပေါ်ကျိုးကဏ္ဍ restore လုပ်နည်း
အခုဆိုရင်သင်ကဏ္ဍရဲ့ပြဿနာရရှိမှုပေါ်တွင်သင်၏ HDD စစ်ဆေးဖို့ဘယ်လိုသိသော။ ယင်းစစ်ဆေးရေးပြပွဲတက်နေစဉ်အတွင်းဒေသများပျက်စီးလျှင်, တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအပေါင်းတို့, သင့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ Data ကို back up ။ အဆိုပါ hard drive ကို၏ဝန်ဆောင်မှုတိုးချဲ့ဖို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျနော်တို့ပဲအထက်ထောက်ပြသော link တစ်ခုသုံးပြီးနိုင်ပါသည်။